सर्वोच्चले मागेको भन्दा बढि फैसला दियो, संसद् बैठक बहिष्कार गर्नु गलत हो | DNFMEDIA
सर्वोच्चले मागेको भन्दा बढि फैसला दियो, संसद् बैठक बहिष्कार गर्नु गलत हो
आज (सोमबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै बिडारीले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने,‘सर्वोच्च अदालतले जुन निर्णय गर्यो, देश बिग्रिुनको धेरै कारणभन्दा एउटा कारण अदालतले ठिक समयमा ठिक निर्णय नगर्नु पनि हो, यो मुद्दा तीन वर्ष पहिले हालेको थियो । यो त ६ महिनाभित्र गर्नुपर्दथ्यो । अर्को कुरा, मागे भन्दा बढि नै फैसला दियो । नभन्नुपर्ने कुरा भयो । नभन्ने कुरा भनिसक्यो, तर सच्याउने र सुधार गर्ने तरिका छ ।’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले अदालतको फैसला सुधार र सच्याउने तरिका भनेको पूनरावलोकनमा जानु भएको सुनाए । उनले भने,‘पूनरावलोकनबाट यो सच्चिन्छ । दलले पूनरावलोकन गर्छ कि गर्दैन्, त्यो अर्को कुरा हो । जेमा पनि मुद्दा हाल्ने वकिलहरुले मुद्दा हाल्छन् कि हाल्दैनन् ?’
बिडारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब विश्वासको मत लिनुपर्ने धारणा राखे । उनले भने,‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनपनि सक्नुहुन्छ । विश्वासको मत लिनुभएन भने अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ। अब मूल साँचो नेपाली कांग्रेससँग हुन्छ ।’
संविधानविद् डा. सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्चको फैसलामा नेताहरु पूनरावलोकनमा जाने सम्भावना आफूले नदेखेको सुनाए । उनले भने,‘अहिले मुलुक राजनीतिक असफलतातर्फ गयो, यो गर्न नेकपा नेताहरु जिम्मेवार छन् । मुलुकमा अब सफलतातर्फ जानको लागि नेकपाको विकल्प चाहिन्छ ।’
उनले सर्वोच्चको हिजोको फैसलामा पूनरावलोकन हुनसक्छ कि सक्दैन् ? भन्ने कुरामा आफूले नेकपा पूनरावलोकनमा जाने सम्भावना नदेखेको सुनाए । उनले भने,‘नेकपा पूनरावलोकनमा जाँदैन होला। ओलीले हिजै निर्णय मान्छु भन्नुभएको छ । उहाँ रिभ्युमा जानुहुन्न । प्रचण्डजी पनि नेकपाको अध्यक्षको रुपमा मात्रै जान पाउनुहुन्छ । माओवादी केन्द्रको रुपमा होईन । रिभ्युमा जानको लागि प्राविधिक समस्या छ । रिभ्युमा गैहाले पनि स्टे–अर्डर दिने सम्भावना कम देखेको छु ।’
अर्का अधिवक्ता महेश नेपालले अदालतले मागेको भन्दा बढि फैसला दियो भन्नुभन्दापनि अदालतको फैसला मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरा मुख्य भएको सुनाउँदै सबैले फैसला मान्नुपर्ने बताए ।
उनले भने,‘हिजोको फैसला निर्वाचनपछिको दलको स्थितिमा पुर्यो । यसले नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रमा पुर्यायो। मागेको भन्दा बढि दियो भन्ने कुरा आयो, हामीले सर्वोच्च अदालतको फैसला मान्छौं कि मान्दैनौं भन्ने हो ।’
उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हिजोदेखिको भनाई हेर्दापनि विषम परिस्थिति फेश गर्छु भन्नेको सुनाउँदै भने,‘उहाँले माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिएपनि विश्वासको मत लिन्छु भन्नुभएको छ ।’
उनले अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अब एकीकृत पार्टीको रुपमा नयाँ नाम लिएर जाने स्थिति पनि नदेखिएको सुनाए । उनले भने,‘प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने कुरा, माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिएको अवस्थामा हो । उहाँ अब धारा ७६ (२) को प्रधानमन्त्री हो । विश्वासको मत लिनुपर्छ । लिन नसक्दा नयाँ प्रम खोजी हुन्छ ।’
Previous: एसिड छ्यापेर किशोरीको जीवन बर्बाद पार्ने अपराधीलाई कारबाही गर्न सरकारले कानुन ल्यायोः मन्त्री अर्याल
Next: कुन पार्टीको प्रधानमन्त्री हो भनेर अदालतलाई सोध्नुस्ः प्रधानमन्त्री ओली